Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu lacag siiyo Xildhibaano [Daawo]
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdi Saabir Nuur Shuuriye, oo katirsan Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaadey Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Isagoo ka hadlay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Muqdisho ayuu ku sheegay in Farmaajo uu xilkiisa ku weyn doono qodobo kamid ah dastuurka oo uu jebiyay, kuwaasi oo uu kamid yahay weerarkii iyo xarigii CC Shakuur.
"Xaq ayaan u leenahay hadii uu Madaxweynaha jebiyo qodob kamid ah qodobada Dastuurka waxaa waajib nagu ah oo aan u dhaaranay in aan la xisaabtano, la xisaabtankiisa ma ahan inaan inaan madaxa ka salaaxno, ee waa inaan soo jeedin keeno Baaralamaanka oo xilka looga qaado," ayuu yiri Xildhibaan Saabir.
"Farmaajo annagaa adinka hortaagan dadweynow ogaada, ee hal hal ayuu sidoo Qalbi Dhagax adiin dhoofin lahaa, oo dowlado shisheeye adin dhiibi lahaa," ayuu yiri Saabir.
Dhanka kale, Xildhibaan Cabdi Saabir ayaa ka hadlay eedayntii Xeer Ilaalinta Qaranka isaga iyo Xildhibaan kale, isagoo ku tilmaamay go'aankaasi mid xad-gudub ah, oo aan la isaga hareynin.
"Sharaf darradii iyo karaama dilkii nagu sameeyay Xeer ilaaliyaha qaranka waxaan ku kala baxaynaa sharciga, waxaana rajaynayaa in qaladkiisa ciqaabtiisa uu mari doono," ayuu yiri Xildhibaan Saabir.
Isagoo ku laabtey Muqdisho, mudo kadib ayaa waxa uu siyaasiga sheegay in Madaxweynaha...
Farmaajo oo daahfuray xarunta maamulka hawada Soomaaliya
Soomaliya 28.12.2017. 13:57